Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahrain Breaking » Abaphathi be-Middle East: Ukukhokela inqwelomoya kwi-2021
Ukubhabha ngenqwelomoya okuphakathi e-Middle East u-Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
UMbindi Mpuma udlale indima ebalulekileyo kubuchwephesha bokuhamba ngenqwelomoya ixesha elide, kodwa sele ikumashumi eminyaka akutshanje apho ichume ngokwenene. Iyatshintsha indlela abantu abahamba ngayo kumazwe aphesheya, besamkela inguquko yeendleko eziphantsi, kwaye bayilungelelanise neemfuno zayo zentengiso.
Imigangatho yokuhamba ngenqwelomoya eMbindi Mpuma izisa amanqanaba amatsha entuthuzelo, iinkonzo kunye nezinto eziluncedo kubakhenkethi.
Icandelo lokuhamba ngenqwelomoya kwihlabathi liphela libethwe kakhulu yi-COVID-19 kunye nazo zonke izinto ezihamba nazo.
Ngaphezulu kweenyanga ezi-5 zokuqala zowe-2021, amanqanaba omthamo ayehle ngesiqingatha xa kuthelekiswa nenqanaba laphambi kobhubhane.
Idatha ye-IATA yezithuthi zango-Matshi 2021 ibonise ukuba umthamo wehle ngeepesenti ezingama-80 xa kuthelekiswa no-Matshi 2019. Ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuyenzeka, kwaye uninzi lwehlabathi luyaqala ukuvula, kodwa indlela engaphambili ihlala ingumngeni.
Ku kutshanje I-CAPA-Iziko loPhapho Umnyhadala ophilayo, u-Richard Maslen, Umhleli Wokuqulathiweyo wase-Europe we-CAPA, uthe: "Ayinakukhatywa ukukhokelwa kuyo nayiphi na indawo yenqwelomoya ngo-2021, 2022, nangaphambili, izakubonakala yahluke kakhulu kunakuqala."
Funda - okanye umamele- le ncoko inolwazi kunye nexesha elifanelekileyo Inqwelo moya yoMbindi Mpuma Ababethi abanzima be-Arab Air Carriers Organisation (AACO) uNobhala Jikelele u-Abdul Wahab Teffaha, iGosa eliyiNtloko lezoTshintsho kwiQatar Airways u-Thiery Antinori, kunye ne-CEO ye-Gulf Air Acting ye-Waleed Al Alawi.
Ifuthe le-COVID-19 lifune zonke iinqwelomoya ukuba ziphinde ziqwalasele iinkqubo zazo, ziphucule kwaye zilungelelanise nomyalelo wehlabathi omtsha. Iphaneli yethu yokucinga rhoqo ifike kule mpuma mpuma kwaye kuyasivuyisa ukudibana noMnu Abdul Wahab Teffaha, uNobhala Jikelele weArabhu Air Carriers Organisation, uMnu Thiery Antinori, igosa eliyintloko lezorhwebo eQatar airways, kunye noMnu. UWaleed Al Alawi, umphathi obambeleyo weGulf Air. Ke ndicinga ukuba kubaluleke kakhulu ukuqala, ukufumana ukuqonda indawo yendawo kunye nendlela ethe yabethwa yi-COVID kwezi nyanga zili-18 zidlulileyo. Ke Mnumzana Abdul Wahab Teffaha, ungasinika nje intshayelelo emfutshane malunga nokuba injani mpuma kunye neenqwelo moya zaseArabhu zibethwe yi COVID kwaye ithini imeko ngoku?
Page 1 of 5 Edlulileyo Okulandelayo